I-A3 T-Shirt iphrinta i-Guangzhou China Manufacturer
Incazelo:I-T-Shirt iphrinta i-Guangzhou,Iphrinti ye-Dtg A3 T-Shirt,I-T-Shirt ye-3d iphrinta
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-Digital > I-T Shirt Printer > I-A3 T-Shirt iphrinta i-Guangzhou
Iphrinta ye-A3 T-Shirt Guangzhou :
Ifektri lethu eliseShenzhen, e-Guangzhou eliseduzane. I-T-Shirt iphrinta i-Guangzhou, singathumela ku-Guangzhou. Sinenhlobo entsha futhi esetshenzisiwe ongayikhetha. Le Printer ye-Dtg A3 T-Shirt yenza i-logo ngezingubo, indwangu kanye nemikhiqizo yekotini. Uma usetha ibhizinisi lakho elisha, sicela ungangabazi ukuxhumana nami maduzane. Singumkhiqizi, asikho isidingo sokukhathazeka ngekhwalithi,
Ngivumele ngizenzele wena:
1. Vele uthenge izindleko zekhati elilodwa mayelana ne-USD5.00 ngaphandle kwama-logos noma izithombe.
2. Sebenzisa iphrinta yethu ukuphrinta, izindleko nge-USD0.08.
3. thengisa ngo- USD15.00 okungenani. Ungabona ukuthi ibhizinisi elihle kakhulu.
Le phrinta ye-T-Shirt 3d isebenza ngokulula, okuzinzile. Kungakhathaliseki ukuthi iphethini elula, imibala egcwele imibala noma ukuxuba amaphethini, ukuphrinta kuphela isikhathi esisodwa, akudingeki ukuba wenze ifilimu ngezinqubo ezimbalwa.
uhlobo lwenkampani yokunyathelisa i-high-tech imishini yokunyathelisa yedijithali eyenza into engeyona yokuxhumana, insimu yayo yesicelo inkulu kakhulu, kuyindlela entsha yokwenza ubuciko esandleni sokudweba, izinhlobo eziningi zokunyathelisa, ubuchwepheshe bokunyathelisa kwesikrini. I- lso ayikho isidingo sokuvikela emva kokunyathelisa, ingasindisa lo muntu; emva kokushicilela kusomile kahle, ukuphikisana kakhulu ukugqoka, ukukhwabanisa, ukuphuza utshwala, ukungena kwamanzi; iphethini inemibala, ayikho isidingo i-ICC; ngeke lixhumane ikhanda lokuphrinta uma ungasebenzisi umshini 1 inyanga, izindleko eziphelele ziphansi kakhulu. Iqaphela ngempela umqondo weqiniso weyodwa uhlamvu oluphrintiwe phezulu, akukho ukufaka ipuleti, isithombe esigcwele umbala uma usuqedile. Uma kuqhathaniswa nezobuchwepheshe bendabuko, i-RFC digital Quick Fast T shirt Printer ikusiza ukuthi ulondoloze ukunyathelisa kwesikrini, ukunyathelisa ukushisa nokushisa nezinqubo ezenziwe zendabuko eziyinkimbinkimbi, ihlukana nokunciphisa umbala wenkinobho yendabuko, lo mkhakha uthatha ukukhiqizwa kwemishini, ukunciphisa izindleko zabasebenzi, inqubo yokunyathelisa yezindleko eziphansi, ukukhiqizwa okuphezulu, ukulahla okuphansi, imikhiqizo ephezulu efinyelelwe ngempela! Ingaveza isithombe sombala wesithombe kunoma yikuphi okubonakalayo, okumibalabala, okugqoke ukugqoka, okungahambisani nokuqeda, ngaphandle kokwenza ipuleti, inkululeko yombala, ukunyathelisa okukodwa kanye nezinye izici ukusheshisa inqubo yedijithali embonini yokunyathelisa, ukukhiqiza okukhulu okuphelele nokukhiqiza isevisi ye-100% emva kokuthengisa.
I-T-Shirt iphrinta i-Guangzhou Iphrinti ye-Dtg A3 T-Shirt I-T-Shirt ye-3d iphrinta Iphrinta e-Guangzhou I-T Shirt iphrinta ye-A3 I-T-shirt iphrinta ye-Diy I-T Shirt iphrinta yeCotton I-T Shirt Yokuphrinta Umklamo